Mini Mireza Series Vagadziri - China Mini Mireza Series Suppliers & Factory
The Mini Tabletop beachflag are lightweight, hardware kit inosanganisira zvikamu zviviri fiber pole uye imwe simbi base mune diki zippered bag, nyore kufamba nayo, 3 dzakakurumbira zvimiro zviripo ( feather flag / teadrop mureza / rectangle mureza).
Kusveta mukombe mureza, chibatiso chine mukombe wekusveta chinogona kusungirirwa panzvimbo yakatsetseka segirazi/ tile/simbi.3 maumbirwo akasiyana (minhenga mireza / misodzi mireza / rectangle mireza) iripo.Iyo angle-inogadziriswa furemu dhizaini, unogona kuve nekona chaiyo yaunoda.Pivoting pole inobvumira mureza kutenderera nemhepo.Chishandiso chakanaka chekusimudzira chekushambadzira cheDealship, Maresitorendi, Zviitiko, Shopping mall nezvimwe!
Iyo yakasimba yekukwevera kapu banner yakagadzirirwa yakakosha application inoda chirairo chine simba pane yakatsetseka segirazi nemahwindo emota.Chishandiso chikuru chekushambadzira kwekunze.Inoedzwa mukumhanya kunosvika 120km/h pamotokari inofamba.
Magnetic base banner chinhu chikuru chekushambadzira chinoshandiswa pamotokari kana masherufu esimbi.3 maumbirwo akasiyana (munhenga/misodzi/rectangle) iripo.Pane zvidimbu zvina zvemagineti ane simba zvakanamirwa pabhesi.Uye inogoneka-inogadziriswa, unogona kuve nekona chaiyo yaunoda.
Clip banner isarudzo yekugadzira yekusimudzira uye kubata kutarisisa mukati menzvimbo diki.Iyo inorema-basa yepurasitiki clamp inogona nyore kuchekerera papombi/chubhu/fenzi nezvimwewo, 3 maumbirwo anozivikanwa (feather flag / teaardrop flag / rectangle mureza) iripo.
Yedu patent mota hwindo mureza, inonziwo clip-pamireza, inonamira nyore kune chero mota kana rori hwindo, 3 yakakurumbira maumbirwo (feather mureza / teardrop mureza / rectangle mureza) iripo.Pivoting pole inobvumira mureza kuti ushanduke kuita mhepo, wedzera kutariswa kune yako meseji.Iwo maviri-zvidimbu hwindo clip dhizaini inobvumira mureza & danda kubviswa zviri nyore pasina kudonhedza pasi nepahwindo.